Post Date 2021-10-10 19:04:42
प्रकृति, ईश्वर, ज्ञान, विज्ञान, वस्तु, जीवन र चेतनाबारेको विवेचना र विश्लेषण गरिने विधालाई दर्शन भनिन्छ । कुनै विषयमा व्यापकरुपमा यथार्थ परिचय दिने शास्त्र – अध्यात्मिक तथा भौतिक वस्तु चिन्तन वा विश्लेषण गरिएको कथननै अर्को शब्दमा दर्शन हो । वास्तवमा यो एउटा गहन विषय हो । कुनै कथा, निबन्ध या उपन्यास जस्तो सामान्य पाठकले सजिलै दर्शन बुझिने विषय होइन । विभिन्न विषयका अनेकौं नामका दर्शनहरु छन् । पूर्वीय दर्शन, पश्चिमा दर्शन, आध्यात्मिक दर्शन, भौतिकवादी दर्शन इत्यादि नामले दर्शनलाई नामाकरण गरिएको पाइन्छ । दर्शनबारे लेखिएका अनेकौं ग्रन्थहरु पाइन्छन् । केहि किताबहरुका नाम हुन् ः (१) बेदान्त दर्शन (ब्रम्ह सूत्र) महर्षि वेदव्यास प्रणित (२) दर्शन शास्त्रको प्रारम्भिक ज्ञान रसियन लेखक – भिक्टर आफ्ना सयम (३) दर्शन दिग्दर्शन – राहुल सांकृत्यायन (४) सारसंक्षेपमा पूर्वीय दर्शन र सारसंक्षेपमा पश्चिमी दर्शन पुस्तकहरु – श्री विष्णु अधिकारी (५) पूर्वीय दर्शनको पूनव्र्याख्यान – डा. प्रमोद ढकाल (६) अध्यात्म दर्शन – पवित्र बहादुर खड्का । उल्लेखित किताबहरुले वैदिक दर्शन, भारतीय दर्शन, युनानी दर्शन, इश्लामी दर्शन, बौद्ध दर्शन, युरोपीय दर्शन आदि बारे विषद ज्ञान प्रदान गर्दछ ।
प्रारम्भ (लेखक श्री अर्यालज्यूको संक्षिप्त परिचय)
श्री टीकाराम उपाध्याय अर्यालज्यूले लेख्नु भएको ‘जीवन दर्शन’ पुस्तक हालै मैले पढ्ने सौभाग्य पाएँ । अर्यालज्यू आध्यात्मिक पुस्तकहरुका एक सशक्त लेखक हुनुहुन्छ । वहाँ एक सफल एवं कुशल प्रशासक पनि हुनुहुन्छ । सरकारको उच्च ओहदाहरु– प्रमुख जिल्ला अधिकारी, क्षेत्रीय प्रशासक एवं विभिन्न मन्त्रालयहरुमा उच्च पदहरुमा सेवा गरी हाल सेवा निवृत्त हुनुहुन्छ । सामाजिक अभियन्ता, आध्यात्मिक चिन्तक हुनुको साथै विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संघ संस्थाहरुमा आवद्ध भई सक्रिय जीवन यापन गरी रहनु भएको छ । वहाँले लेख्नुभएका (१) नेपालको मुलुकी प्रशासन र प्रशासनिक सुधारहरु (२) संयुक्त राष्ट्र संघीय शान्ति सेवामा शाही नेपाली सेनाको सक्रिय योगदान (३) भावनाका तरङ्गहरु (कविता संग्रह) (४) गीता ज्ञान एवं जीवन सार र (५) तीर्थ यात्रा किताबहरु नेपाली पाठकहरुको माझ लोकप्रिय रहेका छन् ।
मेरो यो सानो लेखको सन्दर्भ अर्यालज्यूले लेख्नुभएको पुस्तक ‘जीवन दर्शन’ हो । म एक स्वयम् सामान्य पाठकको हिसाबले दर्शन शास्त्रका किताबहरु पढ्न अभिरुचि राख्छु । दर्शन जस्तो अति गहन विषयमा मैले चासो राख्नु भनेको – पौडी खेल्न नजान्ने व्यक्तिले समुद्रमा डुबुल्की मार्ने जस्तो दुरह प्रयास मात्र हुने थान्दछु । तैपनि मैले दर्शन शास्त्रका केहि किताबहरु चियाइसकेको थिएँ ।
प्रस्तुत ‘जीवन दर्शन’ किताबमा निम्न लिखित शिर्षकका ११ वटा लेखहरु रहेका छन् । (१) जीवन दर्शन (२) गहना कर्मणोगति (कर्मको गति गहन छ) (३) धर्म (४) सम्भवामी युगे युगे (म युग युगमा अवतरित हुन्छु) (५) सुखमय जीवन (६ं) धूवाँ (७) माकुरो (८) कुर्सी (९) त्रिविधा भवति श्रद्धा (१०) कीर्तियस्य र जीवती (११) युध्यस्व विगत ज्वरः (सन्ताप मुक्त भएर लड) । यी सबै लेखहरु अध्यात्म दर्शनमै आधारित छन् ।
उल्लेखित लेखका शिर्षकहरुले किताबको गहनताको छनक दिन्छ । ५ वटा लेखहरुको शिर्षक संस्कृत भाषामा रहेका छन् । पहिलो लेखको शिर्षक बाटै यस किताबो नाम रहन गएको छ ।
यस किताबको भूमिकामा प्रा. शिव गोपाल रिसालज्यूको शब्द – “जीवन दर्शनको दर्शन भएपछि” रहेको छ । रिसालज्यूले यहाँ दर्शनको बारे ज्यादै राम्रो शब्द निम्न अनुसार प्रस्तुत गर्नु भएको छ । जीवन नै एउटा दर्शन हो । मृत्य अर्को दर्शन हो । सृष्टि पनि महान् दर्शन हो । सुसुप्तिमा जगत छैन । समाधिमा जगत् छैन । नचिताएको बेलमा जगत् छैन भने जगत् कुनै हालतमा पनि छैन । यही हो दर्शनको पनि दर्शन । यही हो सर्वोच्च दर्शन यही दर्शनलाई आत्मसात गरी जीवन कालमा नै ब्रह्मात्मै क्यबोध गरी मुक्त हुनु नै जीवनको दर्शन हो । यो किताब (जीवन दर्शन) लाई चिनाउनै पर्दैन, यहाँका प्रत्येक शीर्षक, अनुच्छेद, पंक्ति र शब्द–शब्दले बोली रहेका छन् । यी कति गहन र गम्भीर र गतिशिल छन् । यसरी प्रा. शिव गोपाल रिसालज्यूको लेखनीले किताबको अति सुन्दर एउटा तस्बिर प्रस्तुत भएको छ ।
लेखक श्री टीकारम अर्यालज्यूले आफना् आत्म निवेदन शिर्षकमा पोख्नु भएको निम्न लिखित कुराहरु पनि यहाँ उद्धृत गर्न सादन्र्भिक थान्दछु ।
“जीवन दर्शन अत्यन्त गम्भीर र गहन विषय हो । सबैले आफ्नो जीवनको लक्ष्य परमात्मा प्राप्तिलाई बनाउनु पर्दछ भनेर, धर्मशास्त्र, वेद, पुराण, सन्त, महात्मा, तपस्वीहरुले उद्घोषण गर्नुभएको छ । हाम्रो मानवजीवन दर्शन हो, देख्न योग्य हो, दर्शनीय हो । कुनै पनि वस्तुको वास्तविकता बुझ्ने कोसिस नै दर्शन हो । जड र चेतनको सूक्ष्म भन्दा पनि सूक्ष्म तत्वलाई केलाएर देखाउनुलाई दर्शन भनिन्छ ।” यसरी अर्यालज्यूले आफ्नो लेखको अन्तमा दर्शनको बारे अझ व्यापक रुपमा निम्न व्याख्या गर्नुभएको छ ।
मानव जीवनको जटिलताबारे चिन्तन् गरिने मानसिक क्रियाकलाप दर्शन हो । दर्शन दिमागी कसरत मात्र नभएर जीवन पद्धति पनि हो । कुनै पनि ज्ञानको गहिराई तर्फको यात्रा नै दर्शन हो । जीवनमा प्राप्त अनुभूतिहरुको आधारमा बुद्धिको माध्यमले गरिएको अन्तिम सत्यको खोजी नै दर्शन हो । हजारौँ वर्ष पहिलेका तत्वजिज्ञासु ऋषिहरुले ज्ञानको ज्योति बालेर यथार्थताको अन्वेषण गरे । त्यही अन्वेषण नै पूर्वीय दर्शनको आधारस्तम्भ बन्यो । मान्छेले जीवन र जगत् अझै विसङ्गत अनुभव गर्न थाल्यो र त्यही विसङ्गतिबाट सङ्गति खोज्ने प्रयास नै मानवजीवनदर्शन हो, अन्तिम सत्यको खोजीमा मानिसले आफूलाई लगाइरह्यो । मृत्युको भयले मानसलाई छोडेन । पाश्चात्य परम्परामा दर्शनको अर्थ ज्ञान प्रतिको प्रेम अथवा ज्ञानको अन्वेषण भन्ने हुन्छ । भारतीय (पूर्वीय) दर्शनको उत्पत्ति मानसिक असन्तोषको कारण हुन्छ तर पाश्चात्य दर्शनको उत्पत्ति बौद्धिक जिज्ञासाबाट हुन्छ । दर्शनको अध्ययन केवल ज्ञान प्राप्ति मात्र नभएर मोक्ष प्राप्ति पनि हो । जीवनको चरम उद्देश्य मोक्ष प्राष्ति हो ।
हाम्रा पूर्वीय आध्यात्मिक दर्शनका असंख्य शास्त्रहरुमा उल्लेख भएका संस्कृत श्लोकहरुमध्ये लेखक श्री टीकाराम अर्यालज्यूले अति महत्वपूर्ण ८० वटा श्लोकहरुलाई मूल आधार बनाई यो जीवन दर्शन किताब तयार गर्नुभएको देखिन्छ । विशेषगरी गीताका श्लोक, श्रीमद् भागवतका श्लोक, उपनिषदका श्लोकहरु रहेका छन् । सम्पूर्ण शास्त्रहरु कुनै मानवले जीवनभरी अध्ययन गरेतापनि सम्पूर्ण रुपमा अध्ययन गर्न सम्भव छैन । केवल किताब अध्ययन मात्रको अर्थ पनि छैन । जबसम्म शास्त्रले बताएका कुरालाई आफ्नो जीवनमा उतार्न सकिदैन, त्यसको कुनै मूल्य पनि छैन । मलाई लाग्छ, यो जीवन दर्शन किताब गहन अध्ययन गरी आफ्नो जीवनमा व्याबहारिक रुपमा उतार्न सकियो भने त्यसको जीवन धन्य हुन्छ । यस्तो महत्वपूर्ण किताब तयार गरी प्रकाशन गर्नुभएकोमा श्री अर्यालज्यू धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ । वास्तवमा म किताबको समिक्षक होइन । समिक्षा गर्ने क्षमता पनि म मा छैन । केवल मलाई लागेका २–४ शब्दहरुमात्र टिपोटको रुपमा यहाँ प्रस्तुत गरेको हुँ ।
श्री भीम तामाङज्यूले तयार गर्नुभएको रंगिन चित्रले यो किताबलाई आकर्षित पारिएको छ । श्रीमती कृष्णकुमारी उपाध्यायले प्रकाशन गर्नुभएको यो किताबको मूल्य मात्र रू.१००।– रहेको छ । आफ्ना माता स्व. श्रीमती शिवधरा उपाध्याय र पिता स्व. श्री कलाधर उपाध्याय प्रति समर्पण गरिएको यो किताब पठनिय र संग्रहनिय छ भन्ने मलाई लागेको छ । धन्यवाद ।
ॐ शान्तिः शान्ति शान्ति